Zenisha moktan NEw MISS NEPAL 2009(added)
Topic: Zenisha moktan NEw MISS NEPAL 2009(added)
Author Topic: Zenisha moktan NEw MISS NEPAL 2009(added) (Read 94671 times)
Re: Zenisha moktan NEw MISS NEPAL 2009
« Reply #20 on: October 05, 2009, 10:43:53 AM »
« Reply #21 on: October 12, 2009, 09:26:40 AM »
« Reply #22 on: October 12, 2009, 09:29:21 AM »
« Reply #23 on: October 23, 2009, 12:53:22 PM »
« Reply #24 on: October 24, 2009, 04:00:36 AM »
Quote from: tundikhel on September 29, 2009, 01:00:27 AM
Zenisha in "Mai thuli bhai chhu re" music video
yo chai kina hatayako hola YouTube le
« Reply #25 on: October 24, 2009, 04:29:15 AM »
Quote from: xsajha on October 24, 2009, 04:00:36 AM
tyo pani ali porno porno lagyo hola
Quote from: tundikhel on October 23, 2009, 12:53:22 PM
ani yo jenisha nai ho ta?
« Reply #26 on: October 27, 2009, 09:35:58 AM »
Quote from: S1nner on October 24, 2009, 04:29:15 AM
tyo pani ali porno porno lagyo hola :Dani yo jenisha nai ho ta?
ho ni bro... her distinctive smile...
« Reply #27 on: October 31, 2009, 09:52:59 PM »
काठमाडौं, कात्तिक १४ (नागरिक)- मिस नेपाल जेनिशा मोक्तान महिला हिंसा र बेचबिखनको मुद्दालाई लिएर मिस वर्ल्डमा सहभागी हुने भएकी छिन्।
दक्षिण अफ्रिकामा हुने मिस वर्ल्डमा भाग लिन उनी कात्तिक १९ गते प्रस्थान गर्दैछिन्। मिस वर्ल्डको अन्तिम भिडन्त मंसिर २७ मा हुनेछ।
उनले ट्यालेन्ट राउन्डमा मिस नेपालमा प्रस्तुत गरेकै 'थाल नृत्य'लाई देखाउने छिन्। उनी अहिले कोरियोग्राफर रचना शर्मा र पूर्व मिस नेपाल श्वेता सिंहसित अन्तिम प्रशिक्षण लिइरहेकी छिन्। त्यसबाहेक विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधिसित अन्तरक्रिया र महिला सम्बन्धी मुद्दालाई केलाउनमा पनि व्यस्त छिन्।
फस्ट रनरअप ऋचा थापा मगर चाहिँ आगामी मंसिर ७ सातमा हुने मिस अर्थमा भाग लिन शुक्रबार फिलिपिन्स जाँदैछिन्। उनले जलवायु परिवर्तनले नेपालका हिमालहरूमा पर्ने प्रभावको मुद्दालाई उठाउने भएकी छिन्। त्यसबाहेक उनले २०११ को पर्यटन वर्षलाई प्रवर्द्धन गर्न विभिन्न कार्यशालामा समेत सहभागिता जनाउने छिन्। ट्यालेन्ट राउन्डमा नेपाली कत्थक नृत्य प्रस्तुत योजना उनको रहेको छ।
हिडेन ट्रेजरले जेनिशा र ऋचाको बिदाइमा बिहीबार आयोजना गरेको समारोहमा जेनिशाले भनिन्, 'सकारात्मक सोच लिएर मिस वर्ल्डमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछु। त्यहाँ नेपाली संस्कृतिको प्रतिनिधित्व गर्ने छु।'
ऋचाले भने दशैं र तिहारको बिदाले गर्दा प्रशिक्षणमा बाधा परेको गुनासो पोखिन्। उनले भनिन्, 'तैपनि विभिन्न वातावरण, जनावरसम्बन्धी पुस्तक अध्ययन र डब्लुडब्लुएफमा गएर प्रत्यक्ष अध्ययन गरेकी छु।'
यसपटक मिस वर्ल्डमा १ सय २० र मिस अर्थमा ८० देशले भाग लिँदै छन्। यस वर्ष मिस वर्ल्ड दक्षिण अफ्रिकाको योहानेसबर्गमा हुने छ। दुवैले तीन हप्ताको बसाइको क्रममा विविध कार्यक्रममा सहभागिता जनाउने छन्। (nagariknews)
« Reply #28 on: November 08, 2009, 03:21:31 PM »
« Reply #29 on: November 13, 2009, 06:17:50 AM »
Zenisha Moktan Trip to da miss world